Attack on Pearl Harbour - Wikipedia
Dagaalkii -Pearl Harbor Hawaii
Weerarka lagu qaaday Pearl Harbor wuxuu ahaa weerar isdaba joog ah oo ka dhacay Adeegga Ciidanka Bada ee Imperial Japanese Navy oo ka soo horjeeday saldhigga ciidamada Maraykanka ee Pearl Harbor, ee Hawaii Territory, subaxnimadii December 7, 1941. Weerarka, oo loo yaqaan Battle of Pearl Harbor, waxay keentay in Mareykanka uu soo galo dagaalkii labaad ee aduunka. Hoggaanka millatari ee Japan ayaa tilmaamaya weerarka inuu yahay Hawlgalkii Hawaii iyo Hawlgalkii AI, iyo Hawlgalkii Z inta lagu jiro qorshaynta.
Japan ayaa ujeedkeedu ahaa sidii looga hortagi lahaa in la sii daayo Farsamada Mareykanka ee Pacific si ay u faragaliso tallaabooyinka millatari ee qorshaysan ee Koonfur-Aasiya oo ka dhan ah dhulalka dibedda ee Boqortooyada Ingiriiska, Nederland iyo Mareykanka. Muddadii todoba saacadood ah waxaa isku duba riday weeraro Japan ah oo ku saabsan Filibiin, Guam iyo Wake Island iyo Boqortooyada Ingiriiska ee Malaya, Singapore, iyo Hong Kong.
Weerarku wuxuu bilowday 7:48 subaxnimadii Hawaiian (18:18 GMT). Saldhig waxaa weeraray 353 Diyaaradaha Imperial Japanese (oo ay ka mid yihiin dagaalyahanno, heerarka iyo bambooyinka qarxa, iyo shuftada) laba mowjadood, oo laga bilaabey lix diyaarad diyaaradeed. Dhammaan siddeed sideed ciidan oo Mareykan ah ayaa la waxyeeleeyay, iyada oo afar meelood oo qorrax leh. Dhamaan laakiin USS Arizona ayaa dib loo sara kiciyey, lixna waxaa loo soo celiyay adeegyo waxayna u baxsadeen dagaalka. Jabaanku sidoo kale wuxuu ku dhuftey ama burburiyay saddexda kireyaal, saddex wax burburiyay, markab tababar ah oo ka soo horjeeda diyaaradda, iyo hal minalay. Hal boqol iyo siddeed sideed sideed Mareykanka ayaa la burburiyey; 2,403 Maraykan ah ayaa lagu dilay, 1,178 kalena waa la dhaawacay. Qalabka saldhigyada muhiimka ah sida saldhigga korontada, qalabka qallalan, markabka, dayactirka, shidaalka iyo tas-hiilaadka kaydka shabakadaha, iyo sidoo kale bambada badda iyo xarunta dhismaha (sidoo kale qaybta sirdoonka), lama soo weerarin. Dhibaatooyinka Jabuutiyadu waxay ahaayeen iftiin: 29 diyaaradood iyo shan bas-yar oo maraakiib ah ayaa la waayay, 64 askari ayaa la dilay. Mid ka mid ah badmaaxaha Japan, Kazuo Sakamaki, ayaa la qabtay.
Weerarka lama filaanka ah ayaa yimid xilli ay dad badani argagax ku hayaan dadka reer Mareykan, isla markaana si toos ah ugu soo galay Mareykanka ee soo galay dagaalkii labaad ee dunida ee labada masaajid ee Pacific iyo Yurub. Maalintii xigtay, Diisambar 8, Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay dagaal Japan, dhowr maalmood ka dib, 11kii Diseembar, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay dagaal kasta oo Maraykan ah Maraykanku wuxuu ka jawaabay jawaab cad oo ka dhan ah Jarmalka iyo Talyaaniga. Taageerada gudaha ee ku-meel-gaadhka ah ee aan-dhex-dhexaadinta, oo ahayd mid sii xumaynayay tan iyo Fallkii Faransiiska 1940-kii.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Attack_on_Pearl_Harbour&oldid=224139"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Nofeembar 2021, marka ee eheed 21:50.